I-DL-Panthenol iyi-Pro-vitamin ye-D-Pantothenic acid (Vitamin B5) yokusebenzisa emikhiqizweni yokunakekelwa kwezinwele, isikhumba nezinzipho. I-DL-Panthenol ingxube yobandlululo ye-D-Panthenol ne-L-Panthenol.I-DL Panthenol, iyindawo yokulungisa izinwele eyaziwa kahle ebuyisela ukukhanya nokucwebezela ukufiphaza izinwele ngenkathi futhi ithuthukisa amandla okuqina. Okwengeziwe, i-DL-Panthenol ingumenzeli wokulungisa isikhumba nomswakama osebenzayo.
I-D-Panthenol iwuketshezi olucacile oluncibilikayo emanzini, i-methanol ne-ethanol. Inephunga lesici nokunambitheka okuncane okubabayo. I-D-Panthenol ingumthombo wevithamini B5 futhi isetshenziswa njengesengezo sokudla okunomsoco nesengezo.
I-D-Panthenol iyisithako esisebenzayo sokunakekelwa kwesikhumba kwezimonyo eziyinkimbinkimbi nemikhiqizo yokunakekelwa kwezinwele. Ithuthukisa ukubukeka kwesikhumba, izinwele nezinzipho. Inikeza ukuthambisa kanye nezinzuzo ezilwa nokuvuvukala esikhunjeni futhi ithuthukise ukukhanya, ivimbele ukulimala futhi ithambisa izinwele.
I-D-Calcium Pantothenate ingusawoti we-calcium wevithamini B5 encibilikiswa ngamanzi, etholakala kuyo yonke indawo ezitshalweni nasezicutshini zezilwane ezinempahla ye-antioxidant. I-Pentothenate iyingxenye yeCoenzyme A kanye nengxenye ye-Vitamin B2. I-Vitamin B5 iyinto yokukhula futhi ibalulekile emisebenzini ehlukahlukene ye-metabolic, kufaka phakathi imetabolism yama-carbohydrate, amaprotheni, nama-fatty acids. Le vithamini ibandakanyeka ekwakhiweni kwama-cholesterol lipids, ama-neurotransmitters, ama-hormone e-steroid, ne-hemoglo ...
I-Ascorbyl Palmitate (eyaziwa nangokuthi i-Vitamin C Ester) iyindlela engeyona i-asidi kaVitamin C. Yenziwe nge-Ascorbic Acid (Vitamin C) nePalmitic Acid (i-fatty acid). I-Ascorbyl Palmitate iyi-antioxidant esebenzayo: isiza ukulwa nama-radicals wamahhala futhi ithuthukise ukuhlanganiswa kwe-collagen.
I-Ascorbyl palmitate iyindlela yokutholakala encibilika kakhulu etholakala ngamafutha ye-ascorbic acid (uvithamini C) futhi inazo zonke izinto zomlingani womuntu oncibilikiswa ngamanzi, okuyi-vithamini C. I-antioxidant enamandla ekuvikeleni i-lipids ku-peroxidation futhi iyi-free radical kadoti.
I-Ascorbyl Tetraisopalmitate iyisithako esincibilikiswa uwoyela i-Vitamin C engasetshenziswa ekugxileni okuphezulu ngaphandle kwezingqinamba, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate ingenye yezithako ezizinzile kakhulu zikaVitamin C. Ngaphandle kokuthi izinzuzo ezijwayelekile ze-Vitamin C emsulwa, i-Ascorbyl Tetraisopalmiate ikhonjisiwe ukuthi inikela izinzuzo ezithile zokukhanyisa isikhumba.Ukuqhathanisa i-Vitamin C Ascorbic Acid emsulwa, i-Ascorbyl Tetraisopalmitate ngeke ikhiphe noma icasule isikhumba. Kubekezelelwa kahle yizinhlobo zesikhumba ezibucayi kakhulu. Futhi ngokungafani noVithamini C ojwayelekile, ingasetshenziswa ngemithamo ephezulu, futhi kuze kube izinyanga eziyishumi nesishiyagalombili ngaphandle kwe-oxidizing. kuyinto etholakala emtholampilo efakazelwe, izinzile, encibilikiswa uwoyela c ehlinzeka ukumuncwa okuphezulu okuzenzakalelayo futhi eguqula ngempumelelo ikhulule uvithamini c esikhunjeni. lesi sithako semisebenzi eminingi sivimbela ukusebenza kwe-intracellular tyrosinase ne-melanogenesis ukukhanyisa, kunciphisa ukulimala kweseli noma okwenziwe yi-DNA, kuhlinzeka ngokusebenza okunamandla kwe-antioxidant, futhi kukhulise ukuhlanganiswa kwe-collagen.
I-Ethyl Ascorbic Acid iyisikhungo esihle kakhulu esenza mhlophe isikhumba, ivimbela umsebenzi weTyrosinase ngokusebenza ku-Cu2 + futhi ivimbela ukuhlanganiswa kwe-melanin.Iyinto etherfied esuselwe ku-ascorbic acid, enye yezinto ezitholakala kakhulu ku-ascorbic acid. ukuzinza okuhle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zokwakheka kwezimonyo.
I-Ethyl Ascorbic Acid ingena esikhunjeni lapho ihlanganiswa khona ne-ascorbic acid.Ngenxa yale nqubo ukusebenza kwayo kuphawuleka kakhulu kunaleyo ye-ascorbic acid emsulwa.Akucasuli isikhumba namehlo.
I-Ascorbyl glucoside yinto esebenzayo yemvelo equkethe isakhiwo seVitamin C, kepha izinzile. I-Ascorbyl glucoside ingavimbela ngempumelelo ukwakheka kwe-melanin, inciphise umbala wesikhumba, inciphise amabala wobudala kanye nezimpintshi zombala. I-Ascorbyl glucoside nayo inendima yokukhanyisa isikhumba, isikhumba esilwa nokuguga, njll.
IMagnesium Ascorbyl Phosphate into encibilikiswa ngamanzi, engacasuli, nesuselwa kuVitamin C. Inamandla afanayo novithamini C wokukhulisa ukuhlanganiswa kwe-collagen yesikhumba kepha iyasebenza ekugxileni okuphansi kakhulu, futhi ingasetshenziswa ekugxileni okungaphansi kokungu-10 % ukucindezela ukwakheka kwe-melanin (kuzixazululo ezenza mhlophe isikhumba). Kubalulekile futhi ukuqaphela ukuthi iMagnesuim Ascorbyl Phosphate ingahle ikhethe kangcono kune-Vitamin C yabantu abanesikhumba esibucayi nalabo abafisa ukugwema noma yimiphi imiphumela exfoliating ngoba amafomula amaningi ka-Vitamin C ane-asidi kakhulu (ngakho-ke akhiqiza imiphumela exfoliating).